Construction Chemical – General Paints
GREAT WALL PUTTY
အင်္ဂတေမျက်နှာပြင်တွင် ဖြစ်လေ့ရှိသော သေးငယ်သော အက်ကွဲကြောင်းများ ၊ အပေါက်ငယ်များ ၊ တွင်းချိုင့်များကို ပြန်လည်ဖာထေးပေးနိုင်ခြင်းနှင့် အင်္ဂတေမျက်နှာပြင်သစ်တစ်ခု ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသော ဆေးသားအသွင်အပြင်ရှိခြင်း ၊ ကြွေသားကဲ့သို့ တောက်ပခြင်း ၊ အခြောက်မြန်ခြင်း အစ၇ှိသော အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။. More >>
GREAT SKIM COAT (CONPROTE Q 101)
As an undercoat or fish coat for protection of steel , concrete in aggressive condition . It is suitable for portable water tank lining , steel structures , industrial works , pipeline . More>>
GREAT LATEX FOR CEMENT & GENERAL PUTTY (C-111)
Cement များနှင့် သမမျှတစွာ ရောနှောမှု ၊ ပျော်ဝင်မှု့အားကောင်းပြီး အင်္ဂတေအတွင်းပိုင်းအထိ စိမ့်ဝင်နိုင်ပြီး တွယ်ကပ်အားကောင်းမွန်၍ ပျော့ပျောင်းနူးညံ့ပြီး ကွေးညွတ်မှုဒဏ်ခံနိုင်သဖြင့် PUTTY များအက်ကွဲမှု့ မရှိခြင်း အစရှိသည့် ဂုဏ်သတ္တိများဖြင့်ပြည့်စုံသော ကော်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။. More >>
GREAT LATEX FOR PARQUET
ပါကေးခင်းရာတွင် အသုံးပြုသော ကော်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး သစ်သားနှင့် အင်္ဂတေ ၊ Wall Paper နှင့် အင်္ဂတေနံရံအစရှိသော နေရာများတွင် တွယ်ကပ်စေရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ထုတ်ပိုးမှု့အပိုင်းနှင့် Plastic Fiber လုပ်ငန်းများတွင် ပါအသုံးပြုနိုင်ပြီး Ethyl Vinyl Acetate (EVAC) ကို အခြေခံပြီးစီမံ ထုတ်လုပ်ထားသဖြင့် လျှင်မြန်စွာခြောက်သွေ့ခြင်း ၊ မှိုစွဲကပ်ခြင်းတို့ကိုလည်း ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်ပါသည်။. More >>